I-Tire Rubber Recycling ne-High-Performance Ultrasound - Hielscher Ultrasound Technology
Imfucumfucu yokulahla udoti iyinto enobuthi, engakheliseki kalula eyenza ukulahlwa kwayo kube yinkinga yezemvelo nangokomnotho. I-Ultrasonic devulcanization kuyindlela esheshayo nephumelelayo yokuvuselela imfucumfucu yokulahla udoti ukuvumela ukuphinda usebenzise amathayi odoti. Ukulungiswa kabusha kwerabha ye-Ultrasonic kuyinqubo elula, eye yahlolwa ngempumelelo. Inqubo yomugqa we-lineal scalability of ultrason tire re cycling yenza sikwazi ukwelapha amanani amakhulu ngesilinganiso sezimboni ngezindleko zomnotho.
Inkinga Yokungcola Kwenjoloba
Imfucumfucu yokulahla udoti ibangela inkinga enkulu yemvelo ngenxa yobungozi bayo nokungahambeki kwayo. Ukwakheka kwekhabhoni enobuthi kanye nobuthi bayo obudlangile kwenza ukungabi nalutho kube umthwalo wezemvelo. Izindlela ezijwayelekile zokuphinda zenziwe kabusha zenjoloba azinasimilo, azihambisani nemvelo, futhi impahla enjoloba entsha ekhiqizwe ngenjoloba eyenziwe kabusha ikhombisa ikhwalithi ephansi njengoba amaketanga aphambili we-polymeric yerabha yedoti eshintshwa futhi engenamandla.
Njengoba amathayi eyingxenye yemithombo yemfucumfucu eyinkinga kakhulu, kudingeka izindlela zokusebenzelana kwezemvelo nezomnotho noma zokuphinda zenziwe kabusha. I-Pyrolysis ne-devulcanization izinqubo eziphumelela kakhulu zokuphinda usebenzise kabusha amathayi. Inqubekela phambili yokuphinda kuvalwe kabusha kukadoti kubalulekile ukuvala umthwalo wezemvelo wamasondo enjoloba futhi kusiza ekunciphiseni ukulahla kwamathayipu ekulahlekelweni komhlaba.
Ukwelashwa kwe-Ultrasonic kungaqinisa futhi kuthuthukise zombili izinqubo zokuvuselelwa kabusha kwamathayi, i-pyrolysis kanye ne-devulcanization.
Uhlelo lwe-Ultrasonic lokudonsela phansi ngenjoloba
Ibhulokhi ye-extruder eyenziwe ngezifiso ukuze ihambisane ne-sonication ibe yi-elastomer eshisayo
I-Ultrasonic Devulcanization yeTire Rubber
Ngokudonswa phansi kwe-ultrasonic, izibopho zamakhemikhali zesibabule-nesibabule nesibabule kumathayi ziyahlukaniswa, okuholela ekuncibilikeni kwerabha okuthambile. Lokhu kuncibilika okwenziwe ngerabha okuncibilikayo kungabuyiselwa futhi kubunjwe emikhiqizweni emisha yerabha, isb. Inzuzo enkulu yokudonsa kwe-ultrasonic ukushisa okuphansi kakhulu okudingekayo. Okokuqala, izingcezu zamathayi odoti ziyafudunyezwa. I-400ºF noma i-200ºC, bese idla nge-screw feeder nge-flow cell, lapho irabha yedoti ichazwa khona nge-high-performance ultrasonics ngaphansi kwengcindezi ephezulu. Ngesikhathi sokukhishwa kwe-ultrasonic i-ruble iguqulwa kusuka esimweni sayo sangaphambilini esiqinile ibe yinto ebonakalayo kakhulu. I-Ultimate ultrasonication yephula inethiwekhi enamacala amathathu ama-elastomers e-vulcanized ngokushesha.Ukulashwa kwe-ultrasonic kwe-decrosslinking kwezibopho zamakhemikhali kuthatha imizuzwana embalwa. Ukuncibilika kwerabha ye-sonication kungaqiniswa ngama-ejenti okwelapha kanye nama-filler futhi kubunjwe kwimikhiqizo emisha yenjoloba.
Ukuthuthukiswa kwe-Ultrasonic Kwezinsalela Ze-Pyrolytic
Izinsalela ze-pyrolytic zingathuthukiswa ngokuzibandakanya ku-hydrochloric kanye ne-hydrofluoric acid ukuze zithole i-pyrolytic carbon black. Ukwelashwa kwe-Ultrasonic kungathuthukisa ngempumelelo izinsalela ze-pyrolytic kusuka kumathayi emfucumfucu kuya kubhizinisi lebhokisi lentengo eliphakeme elingezwe. Ukwelashwa kwe-Ultrasonic post-pyrolysis ngaleyo ndlela kuthuthukisa ukusebenza kwe-pyrolysis yesondo ngokuphelele.
I-Hielscher Ultrasonics ngumlingani wakho onolwazi uma kuziwa kwinqubo ephezulu yokusebenza kwe-ultrasonic. I-devulcanization ye-Ultrasonic idinga amaprosesa asezingeni eliphakeme wezimboni, angasebenza ngaphansi kwengcindezi ephezulu nezimo zokushisa eziphakeme. Enye into edingekayo ukulethwa kwezindawo eziphakeme kakhulu. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ama-sonotrodes aphezulu we-Hielscher's high-Press / high-joto sonotrodes futhi abhekelwa izimo ezifunwayo zenqubo yokuzinikezela. Ngokufa okwenziwe ngezifiso, uphondo lwe-ultrasonic (sonotrode) lufakwe emgqonyeni we-extruder. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo. Ukusebenza okuphezulu nokuthembekile kuphendulela ama-Hielscher ultrasonicators abe yihhashi lomsebenzi wokuvuselelwa kabusha kwerabha!
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi ukucela ulwazi olungeziwe mayelana nezinhlelo zethu ze-ultrasonic zokuphinda usebenzise udoti kabusha. Sizokujabulela ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sikunikeze uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho! Thola imininingwane eminingi namanani manje!
Hong, Chang-Kook; I-Isayev, AI (2003): Ukusetshenziswa kwe-High-Power Ultrasound ku-Rubber Recycling. I-Rubber Society of Korea: I-Elastomers and Composites Vol 38, Isikhalazo 2; 2003. 103-121.
Walvekar, Rashmi; Mohammad. I-Afiq, iZulkefly; IRamarad, iSuganti; Kalid, Siddiqui (2018): I-Devulcanization of Waste Tire Rubber isebenzisa i-Amine based Solvents kanye ne-Ultrasonic Energy. I-MATEC Web of Conferensi Vol. 152, 2018.
I-Vulcanization / Devulcanization
Ukuqothuka inqubo yokwenza irabha yemvelo, enokuqina okuphansi nokuvumelana nezimo, ibe nzima futhi iqinile. Ngakho-ke, irabha yemvelo iyavutha futhi ngokungeza ukuhlangana kwesibabule phakathi kwama-polymers kutholakala. Ngokubhekabheka ama-molecule enjoloba we-polymeric, okuthiwa ama-polyisoprenes, anamathele komunye nomunye ngama-athomu wesibabule. Ngokusebenzisa i-vulcanization okuthiwa irobhothi enobuthi, enikeza ukusebenza okuphezulu nokuqina. Irabha eyenziwe nge-Vulcanized itholakala emathayi, ama-hoses enjoloba, amasokisi wezicathulo, amathoyizi njll.
I-Devulcanization kuyindlela lapho ukwakheka kwe-crosslink, ikakhulukazi izibopho zesibabule-nesibabule kanye / noma i-carbon-nesibabule kucishwe. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezahlukahlukene ezifana ne-mechano-chemical, chemical, biological, and high-power ultrasonication.
Irubber yaziwa nangokuthi ama-elastomers. I-Elastomer isifushaniso se-polymer elastic. Ama-Elastomers abonisa izici ze-viscoelastic: zingama-polymers anamathela, anwebeka kakhulu. I-ruble yamagama isetshenziswa kaningi ukuhlukanisa iqembu lama-elastomers okumele ahlakazwe noma aphulukiswe ukuze abe lusizo.
Zenziwe ini iTubber Rubber?
Irabha laseTire (American English) noma irabha yerabha (iBritish English) lenziwa ngezinto eziningi, kufaka phakathi irabha, izihlungi nezinye izengezo. Irabha laseTire lingahlanganiswa nerabha yemvelo, yenziwe kusuka ku-latex sup, ekhishwa kusuka kumagxolo esihlahla senjoloba, noma irabha elenziwayo. Ama-ruble angama-synthetic enziwe ngophethiloli. Izindlela ezijwayelekile zokwenziwa zenjoloba yirabha ye-styrene-butadiene (SBR), irabha le polybutadiene, kanye nerabha le-butyl. Ngenkathi irabha iyisithako esiyinhloko samathayi, amafilidi nezithasiselo ahlanganiswe ukwakha into yokusebenza kwethayi esebenzayo. I-Carbon emnyama kanye / noma i-silica ingama-filler ajwayelekile kakhulu efakiwe ukuqinisa i-tire complate. I-Carbon black and silica ithuthukisa ukubambeka, amathayi wesilisa amelana kakhulu nokujikijelana futhi anciphise ukumelana kwethayi. Ama-antioxidants, ama-antiozonants kanye nama-anti-ukuguga ama-ejenti ngezinye izithasiselo, ezithuthukisa ikhwalithi yamathayi nokwelula impilo yesondo.